Zuzulọ ahịa Mzuzu na-enye ndị na-eto eto aka na Malawi Nkà Mmụta Mmepụta
Mzuzu Ndi oru itumgbere ahia Hub na-enye oru Nka na-eto eto bi na Malawi
Inyocha uche nke Cybercriminal
Chaka nwetara ikike izizi nke Fintech ikikere ikike Digital Investment
Ihe kpatara ị ga-eji tụlee Remote DBA na Ndụmọdụ Ndị Bara Uru iji chọta ihe kachasị mma
Edtech Startup HyperionDev nwetara $ 3.5m Series A Ego
Na-akwadebe Ọgbọ na-esote n'ịgbazi Ngwá Ọrụ Fintech ka ọ bụrụ Onye Ọrụ
Foundlọ ọrụ guzobere Lagos iji kwado mmemme omume na Iwu Iwu
Ndị mmekọ LifeQ na-eme ka nkwalite Ahụ Ike maka Ndị Na-eji Ngwaọrụ Wearable
Buhari kwadoro ndị otu itinye aka na Twitter maka nkwusioru
Mbido Mkpụrụ? Tinye maka Ihe Omume Ihe Omume Mbido Onye Mere
FabLab Winam na-enye ndị Kenya ikike idozi Chama Aka Obodo
MainOne na-agbasawanye akara ụkwụ Digital nke Africa, kpughere MDXi Appolonia Data Center
# AESIS2021: VC4A Venture Showcase mepee Ngwa maka mmalite mmalite nke Africa
N'ime mbipụta nke izu a nke ụlọ agha AfriLabs, nke nwere ebe a na-emepụta Innovation n'ofe Africa, anyị gara East Africa, bụ ebe anyị hụrụ Wangiwe Joana kambuzi, Onye guzobere na onye isi nke Mzuzu entrepreneur Hub na Malawi.
Mzuzu entrepreneur Hub bụ ụlọ ahịa achụmnta ego, ihe ọhụrụ na teknụzụ hiwere na 2017.
The hub support tech na ndị na-abụghị teknụzụ mmalite na ikike ụlọ ịmalite na ijikwa azụmahịa iche na-eke a ikpo okwu maka nkà nyefe wetara dijitalụ ọdịiche.
Mzuzu entrepreneur Hub na-enye ohere na-arụkọ ọrụ ọnụ, nkwekọrịta azụmahịa na enyemaka ọrụ aka na mmalite na ụlọ ọrụ na-apụta site na ijikọta ha na netwọkụ nke ọrụ maka uto na ihe ịga nke ọma.
Ikwado nke a site na nka na mbufe ihe omuma, nkesa ozi ma nye ohere inweta ihe ndi ozo, ohere na ntaneti.
Dabere na onye guzobere ya, ndị bi na Malawi bụkarị ndị na-eto eto gụnyere 70% nke ndị bi na mba ahụ.
Agbanyeghị, ha so na ndị kachasị nwee nsogbu n'ihi ọrụ ọrụ na-ebelata.
"E wezụga ọtụtụ puku ndị na-eto eto na-agụsị akwụkwọ na kọleji, o doro anya na ha enweghị ikike ụlọ ọrụ nke nwere ike ime ka ha nwee asọmpi na ahịa ma ọ bụ kwado ha ịmalite ụlọ ọrụ."
Ogige a na-abata iji mejupụta ọdịiche ahụ ma kwado uto nke ndị ọchụnta ego na Malawi
Wangiwe kwuru na ehiwe a dabere na Malawi ka ewulite gburugburu ebe obibi na nyiwe ebe ndị ọhụụ nwere ike iwulite nka na amamịghe banyere ọrụ ha.
Dabere na Onye guzobere ya, kwa afọ, ehiwe ahụ na-akwado mmalite 50 site na mmemme Bizcubation na Hatchstart incubation nke na-achọ ịzụlite echiche n'ime azụmaahịa.
“N'otu oge ahụ, anyị na-akwado ndị na-eto eto nwere nkà na ụzụ dijitalụ nke nwere ike ịgụnye; njikwa data, ịmepụta weebụsaịtị, mmemme kọmputa, ịre ahịa dijitalụ, njikwa ndị ọrụ njedebe, na foto na vidiyo.
Anyị na-ezube iji wulite ikike nke ndị na-eto eto na nnukwu data na ịntanetị nke ihe iji zụlite mmepe mba. ”
Innovation na oru itumgbere ahia
N'ebe otu ulo oru si akwalite ihe ohuru na oru itumgbere ahia na obodo ha, Wangiwe kwuru na hubs bu ihe di nkpa n'ime obodo dika ha bu isi na-enye ndi na-eto eto ihe omuma banyere mmepe na mmuta.
"A na-etinye Hubs nke ọma iji kpalie, rụọ ọrụ ma mee ka ọchụnta ego dị ngwa ka ha na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi dị iche iche.
Na steeti Innovation na entrepreneurship na Malawi, onye nchoputa kwuru, “Ọ bụ ezie na ngalaba mmụta anaghị amata ihe ọhụrụ na ihe ọchụnta ego, a na-ewebata ndị na-eto eto n'echiche ahụ na njedebe nke na-eme ka ndị na-eto eto ghara ịghọta ihe gbasara ịzụ ahịa"
Mzuzu entrepreneur hub team members
Mgbe Wangiwe nabatara Malawi na nnabata ya na otu esi agba ya ume site na ụlọ akwụkwọ praịmarị, Wangiwe kwuru na n'ihi ụkpụrụ ọdịnala, ọha na eze ahọpụtala ihe ụmụ nwanyị na ụmụ nwanyị nwere ike ime.
“Ekwesiri ịgba ndi nwanyi ume banyere ikike ha nwere na STEM ma nwee ike kwado ya site n’inwe mmata na ulo akwukwo sekọndrị na ụlọ akwụkwọ praịmarị.
Otu ihe dị mkpa bụ iwebata ihe ga-eme n'ụlọ akwụkwọ nke ọ bụla na nwata ka o wee nwee ezigbo echiche banyere ndị na-eto eto. ”
Ihe ịma aka na akara ngosi
Ebe a n'ihi na ndị ọrụ ya pere mpe enwebeghị ike ịgakwuru ọtụtụ ndị otu mpaghara ya, agbanyeghị, ụlọ ọrụ ọhụụ ahụ akwadola obodo na mmalite ọ rụgoro ugbu a.
"Anyị akwadogo mmalite iri abụọ na abụọ iji bido n'ala site na mmemme mmemme anyị, jikọọ mmalite iri na abụọ na ndị na - enweta ego wee gakwuru ụmụ akwụkwọ karịrị puku iri na ise na ụlọ akwụkwọ sekọndrị na kọleji na - eme ka anyị mata banyere ịchụ nta ego."
Ọrụ Governmnet na AfriLabs
N'ihe banyere gọọmentị Malawia nwere ike inyere aka na mba ahụ, onye nchoputa kwuru na enwere ike ịnye nkwado site na ịmepụta oghere na-agbanwe agbanwe maka ogige wee mee ka ụfọdụ iwu nwee ike ịmalite mmalite.
"N'aka nke ọzọ, gọọmentị nwere ike ịmepụta ụma ụgbọ ala eji eme ego iji kwalite usoro okike site na arụmọrụ."
AfriLabs arụwo ọrụ dị mkpa na njem nke Mzuzu Entrepreneur Hub site na ime ka ọ dị mfe, mụta iji nweta njikọ ego na ngosipụta nke gburugburu ụwa.
Women'smụ nwanyị na-ekere òkè na teknụzụ
Na nsonye ụmụ nwanyị na nkà na ụzụ, onye nchoputa kwuru na ọ dị mkpa ka ụmụ nwanyị na-ekere òkè na ọkwa niile.
Increbawanye ikenye ụmụ nwanyị ga-apụta imebi usoro ọdịbendị na imebi iwu metụtara adịghị ike. ”
Ihe onyonyo a gosiputara: Wangiwe Joana kambuzi, Onye guzobere na Onye isi Nchịkwa, Mzuzu Entrepreneur Hub
Vlọ nyocha Nchọpụta SAVANNAH na-enye ndị ọchụnta ego nke Sudan ikike maka Ahịa Global
Ellọ ọrụ Innovation Clintonel na-ekwupụta ọkwa ụwa maka ndị gụsịrị akwụkwọ na injinịa
Genesys Tech Hub na-akwado mmalite ịmalitewanye Market na Resources ha
Ngọngọ & Akụkọ Crypto